Raga guursada dumarka buuran oo la ogaaday in ay la kulaman 5 dhibaatada xiliga galmada warbixin muhiim ah - iftineducation.com
Raga guursada dumarka buuran oo la ogaaday in ay la kulaman 5 dhibaatada xiliga galmada warbixin muhiim ah
iftineducation.com – mar hadii aad aragto arimo kuwaan o kale ah waxaad dhici karta in aad wax badan isweydiso waayo markaad maqasho barnaamijka aan hada ka hadleyno waxaa laga yabaa in aad sifican aad u xiiseyso waayo raga dhan waxaa ay jecelyihin dumar caata lkn taas waa dhib waayo dumarka buuran waa kuwa dhib badan la kulma marka ay guursadaan kadib.
Taas waxaan kaga danleeyahay arimo badan kuwaas oo aan hoos ku qori doono hadii alle idmo mar hadii aad tahay nin raga waxaan dareemi karnaa in aad jeclaan laheed in aad hesho naag caato lkn taas ma ahn mid faaido ku keeneys 100% waayo dumarka buuran inta badan maahan kuwo caafimaad qaba .
1: Dumarka buuran inta badan waxaa ay qabaan xanuuno aysan qabin dumarka kale sida cudurka buurnaanta(obesity).
4: Waxaa dumarka qurxoon intoda badan lagu arkaa in ay noqdaan kuwa areebo ah ama baali noqdaan kuwa areebo ah ama baali.
5: gabadha buuran hal ceeb ayay leedahay taasi waxay tahay marka galmo lala samaynayo sida la rabo lama yeeli karo qaababka galmada oo dhan laguma fulin karo.
Somali cab driver shot in Louisville is likely paralyzed, family says
Sirta ay u diidaan hablaha marka la soo doono